Piwigo mampiditra amin'ny WordPress - FRANTSAY Interface
Author: FRANTSAY Interface Date Published: 1 Mey 2019 2 Comments amin'ny Piwigo mampiditra amin'ny WordPress
Lahatsoratra nohavaozina 4 Febroary 2020 ny 5 H 39 ahy
Ahoana no mampiditra Piwigo amin'ny WordPress ny & rsquo; miaraka amin'ny alias apache ary ny iframe.
soratra FI ny asa amin'izao fotoana izao dia hita ny fomba mampiditra Piwigo (logithèques d'imagerie website) avec WordPress sous un autre dossier que le site principal.
Dia mila mba hamoronana ny ankizy pejy mba manana rohy mankany amin'i ny Gallery Piwigo.
Ny rohy ho an'ny rakitra dia ho tsy maintsy atao amin'ny antsoina mba hanampy ny httpd.conf ny Apache lohamilina.
Ny fampidirana ny Piwigo manomboka avy amin'ny fampirimana hafa mampiasa ny F & rsquo; ny iframe tsy maintsy
raha tsy te-afangaro ny rakitsoratra WordPress ny tranonkalan'ny amin'izany ny Piwigo
Tsy fahazoan-dalana mankany ho solon'ny tsara fampiasana ny vohikala sy ny Gallery.
Zava-dehibe ny compartmentalize fizarana ny sasany: Module izay afaka mitaky ny angona nomaniny ho solon'izay loharano.
Ny asan'ny WordPress ary piwigo Mety tsy ho tafiditra mivantana.
Maneho ny pejy iray manontolo ao amin'ny Gallery raha ny fitandremana ny tranonkala ny endri-javatra,
tsy maintsy hanova ny ankizy pejy (ny tiany amin'ny alalan'ny mpamoaka lahatsoratra),
hamafa ny get header, hanoloana tanana amin'ny alalan'ny fandikana ny andalana vitsivitsy miantso asa WordPress izay hita any amin'ny fiandohan'ny ny antontan-taratasy header.php ny foto-kevitra.
Nous allons maintenant rechercher la fonction de single.php, ny iray maneho ny lahatsoratra.
Mba hamorona ny iframe, kopia andalana sasany ao amin'ny WordPress pejy famoahana lahatsoratra boaty.
Ny vokatry ny ity Iframe dia haneho ny Gallery manontolo efijery.
Ohatra eto ambany voarakitra ao amin'ny DIV ny lahatsoratra amin'ny Functional Gallery ny tranonkala.
Nisy olana hafa hitan'ny amin'ny teny Fikarohana na mampiasa plugin Transposh ary ny antsoina toy ny Fikarohana rohy, dia manampy ny Ovay rohy, ka misy vokany redirection.
Voavaha amin'ny alalan'ny fanampiana <androm class = & quot; no_translate & quot;> ary </androm> toy izany.
Antenaina tutorial ity dia hanampy ny olona amin'ny olana.
Aza misalasala mba hahatonga antsika hamela ny fanehoan-kevitra mba hanatsarana ny fanoratana.
2.1 avy any 5 kintana (miankina amin'ny 8 hevitra)
Официально сообщаем Вам о том что принят вердикт обеспечить Вам некую сумму. Рекомендуем сейчас Обязательно уточнить детали пройдя на главную страницу платежного сервиса в течение 5 часов.Не упустите момент пока Ваш доступ в систему не заблокирован!Зайти в систему: ny https://tinyurl.com/AssefDox NMVV1196992RKKF
Осведомляем Вас о том что принят вердикт обеспечить Вам некую сумму. Рекомендуем сиюминутно пройти шаги перейдя на основную страницу почтового сервиса в течение 30 минут.Не упустите момент пока Ваш доступ в систему не аннулирован!Зайти в систему: ny https://tinyurl.com/AssefDox NMVV1196992RKKF
Author: FRANTSAY Interface Date Published: 1 Mey 2019 Leave a Comment on Winrar gratuit (Version 3.71)
maimaim-poana winrar (Version 3.71)
Author: FRANTSAY Interface Date Published: 1 Mey 2019 Leave a Comment amin'ny Alias ​​Apache 2.4 Windows
Apache antsoina 2.4 Windows
2 thoughts on "Piwigo mampiditra amin'ny WordPress”
cong cu phan tich website hoy i:
14 Aogositra 2019 amin'ny 6 H 22 ahy
download hoy i:
21 Jona 2019 amin'ny 22 H 37 ahy